Waa Maxay Talaabada Uu Lionel Messi Baraha Bulshada Ka Sameeyay Ee Farxadii Ugu Waynayd U Abuurtay Guardiola & Man City? - Gool24.Net
Waa Maxay Talaabada Uu Lionel Messi Baraha Bulshada Ka Sameeyay Ee Farxadii Ugu Waynayd U Abuurtay Guardiola & Man City?
July 17, 2020 Mahamoud Batalaale
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa dab ku sii shiday mustaqbalkiisa Barcelona kadib markii uu baraha bulshada ka sameeyay ficil sabab u noqonaya in ay maamula kooxda Man City ay farxad wayn ku soo dhaweeyaan.
Lionel Messi ayaa cadho wayn muujiyay kadib markii ay kooxdiisa Barcelona xalay guuldaro lama filaan ah kala kulantay kooxda Osasuna isla markaana waxa uu qiray in ay kooxdiisa Barca lumisay wax walba oo ay taageerayaashu yihiin kuwo ka cadhsyan awood la’aantooda.
Laakiin iyada oo mustaqbalka Messi uu miiska saaran yahay waxa uu baraha bulshada ka raacay barta Instagram ee Man City taas oo keentay shaki wayn oo ah haddii uu Guardiola kula midoobi doono Man City mar haddii City laga qaaday ganaaxii Champions league.
Gabadha barnaamij soo saaraha ka ah City TV ee Natalie Paweleck ayaa taageerayaasha Man City isku dhex yaacisay kadib markii ay soo bandhigtay in Messi uu kooxdooda ka soo follow gareeyay barta Instagram waxayna u sheegtay in ay hadda dhacayso in Messi uu ku soo jeedo Man City.
Natie Paweleck ayaa soo goysay sawirka qaybta muujinaysa in Messi uu kooxdooda Man City ka soo raacay Instragram waxayna taasi keentay in falcelin badan ay sameeyaan taageerayaasha kubbada cagtu gaar ahaan kuwa Man City.
Man City waxay ka mid tahay kooxaha dhaqaale ahaan awooda buuxda u leh in ay Lionel Messi siin karaan mushaarkiisa waalida ah waxayna sidoo kale City ka mid tahay koox xidiga reer Argentina siin karta ciyaartoy leh hanaan ciyaareed oo ku haboon.
Waxaana intaas dheer in Lionel Messi iyo Guardiola ay yihiin kuwo ixtiraamka ugu badani ka dhexeeyo waxayna Man City farxad wayn ka muujiyay in Messi uu ka soo raacay bartooda Instagram oo uu fallow gareeyay.
Messi ayaa markii ay soo dhamaatay ciyaartii Osasuna waxa uu warbaahinta su sheegay: “Maanu doonayn in aanu qaabkan xili ciyaareedka ku dhamaysano, laakiin waxay u taagan tahay sida uu xili ciyaareedku u tagay”.
Messi oo dareen cadho leh muujinayay ayaa yidhi: “Bilaa dhaqaaq aad u badan ayaanu lahayn, aad ayaanu u liidanaa, waxaanu nahay koox xoogeedu hooseeyo. Dhibco badan ayaanu luminay, ciyaarta maantu waxay soo koobaysaa xili ciyaareedka”.
Heshiiska Lionel Messi waxaa ku jira qodob u ogolaanaya in dhamaadka xili ciyaareedkan uu si xor ah ku bixi karo waxaana sii xoojinaya in go’aanka Messi uu soo deg dego maamulka Bartomeu oo qaaday talaabooyin badan oo xidiga reer Argentina murugo ku abuuraya.
Guardiola iyo kooxdiisa Man City oo dhawaan u dabaal degay farxadii maxkamada CAS ay kaga dul qaaday ganaaxii Champions League ayaa hadda ku riyoonaya in ay Messi kooxdooda ku helaan.
Si kastaba ha ahaatee, Barcelona oo maamul ahaan iyo ciyaartoy ahaanba burbur ku jirta ayaan la ogayn nooca talaabooyinka ay qaadi doonaan haddii ay Messi ku sii qancin karaan in uu kooxda sii joogo.